Zvemagariro zvinopisa nyaya | TIGERNU
TIGERNU yakatanga basa rakateedzana nguva pfupi yadarika, uye ikanyatso ita zvinodiwa neveVirus Prevention Command department muGuangzhou, uye ikaita kudziya kwekushisa, hutsanana uye utachiona, uye kudzorera kunyoreswa kwevashandi vakagadzirwazve.
Pepa rekudzivirira kweCoronavirus rakatumirwa munzvimbo yefekitori, zvichiratidza kuti vashandi vanoshandiswazve basa vanofanira kusimbisa kudzivirira nekudzivirira, vanzwisise ruzivo rwezvehutano, kuvandudza kuziva kwehutano hweveruzhinji, uye tinokumbira vese vashandi kuti vapfeke mask.
Tinofanira kubata hutachiona zvakanaka, uye hatigone kumisa kushanda kwekambani. Vese vashandi veTIGERNU havana kumboregedza kutarisisa hutachiona kwechinguva. Iyo corona hutachiona hwekudzivirira ndiyo yakajairwa chisungo uye mutoro wenzanga yese, ndozvinoita bhizinesi kushanda Iri ibasa kunyika, kuvanhu, kumhuri, kukambani uye kuvatengi.
Kubva kupera kwegore rapfuura, vamwe vashandi havana kudzoka kumba kuzororo regore idzva reChinese, kunyanya iro dhipatimendi rezvigadzirwa, iro rinotungamira fekitori uye rinoona nezvekufambiswa kwezvinhu uye kuendesa. Kubva pakatanga iyo coronavirus kusvika pakutangazve kwekugadzira, yakanyatsogadzirisa matambudziko akasiyana kubva kubazi rekutengesa uye rekushambadzira.
Chekupedzisira, tinoda kutambanudzira zvido zvedu kune vese vashandi vedu uye vatengi vane hanya uye vanotsigira kuvandudzwa kweTIGERNU. Tese tinofara. Ndatenda nekunetseka kwako. Mugore idzva, tichava pamwe chete uye tinokunda iyo coronavirus.